beerta codsiga Product - Huizhou Jinhaocheng Co., Ltd
Maamuusta / Awards
beerta codsiga Product
Sifeey Nonwoven Fabric
Rooga iyo Mats
Car Gudaha Fabric
Kaamerada addoonsi Wadding- batting
Furaash & Quilting
Non-xidhka daabaca Product dhammeeyey
Xirxirida & Shipping
Waxaan ujeedadoodu tahay si ay u noqdaan ganacsi ee casriga ah la fiican ee ganacsi ee "daacadda iyo kalsooni" iyo ujeedada "Siinta macaamiisha adeegyada ugu daacad ah iyo alaabta tayada ugu fiican". Waxaan si daacad ah u weydiisato aad taageero beddelin iyo mahad aad talo iyo tusaaleyn nooc.
Waxaan lahaa oo aad u badan soo dhaweyn fursad ay ku sameeyaan ganacsiga adiga oo ay haystaan ​​ku farxaa lifaaqaaya faahfaahin dheeraad ah ee alaabta our. tayo wanaagsan leh, qiimaha tartan rasmi ah, bixinta wakhti iyo adeeg la isku hallayn balan qaadi karo.
waxyaabaha Our kala qaybsan yihiin: Irbad feeray Taxanaha, Taxanaha Spunlace, kulul addoonsi (hawo kulul iyada oo loo marayo) Serial, Hot Rolling Serial, Quilting waxyaabaha ugu muhiimsan ee Serial iyo dukumiintiyo Series.Our yihiin: midabka MFT dareemay, printe dnon-xidhka daabaca, dhar gudaha baabuurta, muuqaalka geotextile injineernimada, maro saldhig rooga, bustaha korontada non-leh tolmo wanaagsan, masarka nadaafadda, suuf adag, derin ilaalinta alaabta guriga, suufka furaash, kursiga alaabta guriga iyo waxyaabaha non-leh tolmo wanaagsan others.These hubkaas ayaa loo isticmaalaa iyo tageerayaasha dhinacyo kala duwan ee bulshada casriga ah, sida sida: ilaalinta deegaanka, gaari, kabaha, alaabta guriga, joodariyaasha, dhar, shandadaha, alaabta lagu ciyaaro, filter, daryeelka caafimaadka, hadiyado, sahayda korontada, qalabka audio, dhismaha injineernimada iyo warshadaha kale. Xirrira sifooyinka alaabta, waxaan ma aha oo kaliya la kulmay baahida qoyska, laakiin sidoo kale dhoofiyo Japan, Australia, Koonfur-bari Eeshiya, Europe iyo meelo kale oo sidoo kale ku riyaaqayaa sumcad sare ka macaamiisha adduunka oo dhan.